“ရှိစေကောင်း ၏ …….မကောင်း၏” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ရှိစေကောင်း ၏ …….မကောင်း၏”	4
“ရှိစေကောင်း ၏ …….မကောင်း၏”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 27, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography, Travel |4comments
တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ (၆)
မြန်မာပြည်ဘက်က မူဆယ်နဲ့ သူတို့ဘက်က ကျယ်ခေါင် ဆိုတာ ကျောက်လမ်းမလေးတစ်ခုဘဲခြားပါတယ်။
1 ကျနော်တို့ဘက်မှာသစ်ပင်ဝါးပင်မရှိအိမ်အပြည့်
အဲတော့ သူတို့ဘက်က ရာသီဥတုမှန် မိုးလေ၀သမှန်လို့အေးအေးချမ်းချမ်းပါဘဲ။
ကျနော်တရုတ်စာ မတတ်လို့လားတော့ မသိဘူး။
“ သစ်တစ်ပင်ခုတ် အချုပ်သုံးလ”တို့
ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘက်က သစ်ပင်ကို ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။
သစ်ပင်တွေကို သူတို့ အပင်လိုက်နူတ်ပြီး လမ်းဘေးတွေမှာစိုက်ကြပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ လမ်းဘေးမှာစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေက အသီးသီးနေပါပြီ။
စ တင်စိုက်ကာစက အရိုးပြိုင်းပြိုင်းအပင်တွေက အခုချိန်မှာစိမ်းစိုလန်းဆန်းလို့
4 2010 အရိုင်းပြိုင်းပြိုင်း
5 2015မှာစိန်းလန်းနေတဲ့ ဒီနေရာ
မြစပဲရိုး says: တရုတ်အစိုးရ က ဘယ်လောက် အာဏာရှင်လို့ ပြောပြော ဦးဏှောက်ရှိတယ်။
တိုင်းပြည် ကို ကမ္ဘာ့ ရှေ့တန်းရောက်အောင် တွန်းပို့နိုင်တယ်။
. ရွှေပြည်က ရွှေအာဏာရှင်တွေ ကတော့ သူတို့ စားဖို့ ကလွဲ လို့ ကျန်တာ ခေါင်းထဲ ဘာဆိုဘာမှ မရှိ။
အသီးစားအပင် တွေထဲ့ ပိန္နဲပင် ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
အရွက်နု၊ အသီးနု လေးတွေ ကို တို့စားရတာ ကြိုက်တယ်။
အသီး ကို စားတယ်။ အစေ့ ကို ပြုတ်စားတယ်၊ ဖုတ်စားတယ်။
အပင် က အရိပ်ရတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တစ်ယောက်ကတော့ ပြောသွားတယ် တရုပ်ပြည်မှာအပင်က အသီးကိုခူးရင်ဒဏ်ငွေ 500လို့ရေးထားတယ်တဲ့
Alinsett @ Maung Thura says: .ရိုးမတောကြီးတွေ .. သစ်တောကြီးတွေကို မရောက်ဖြစ်တာကြာလို့…အခု တောင်ကတုံးတွေ ဘယ်လောက် ပြောင်နေပြီလဲ..မသိတော့ဘူး..
.အတော်လေးတော့ ပြောင်သလင်းခါနေလောက်ပြီ ထင့်….
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ငွေဆောင်တို့ ချောင်းသာတို့ အသွားမှာတောင်…လမ်းတလျှောက် မြင်ရတဲ့
.ပြောင်တဲ့သူ အုပ်ချုပ်လေတော့…. အသွင်တူ ..ပြောင်ကုန်တာ ထင့်…
အောင် မိုးသူ says: ဟူးးးးးးးးးးး သက်ပြင်းသာချမိတော့တယ်။